Momba anay - Ningbo ZODI Auto Spare Parts Co., Ltd.
Ningbo ZODI Auto Spare Parts Co., Ltd. dia mpivarotra matihanina momba ny fiara mandritra ny 10 taona, izay hita ao amin'ny distrikan'i Beilun, Ningbo, Sina. Ny vokatra lehibe dia misy ny rafitra fanamainana, ny rafitra fampiatoana, ny rafitra familiana, ny rafitra mangatsiaka, ny rafitra Stater, ny rafitra Turocharger, ny faritra misy ny motera, ny faritra ao amin'ny vatana, ny rafitra Ignition , Sensoran'ny herinaratra sns. Ary ny faritra misy ny fiara no tena ilaintsika
Fiara: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Chevrolet, Daewoo, Kia, Isuzu, Mazada ary Ford;
Kamio: Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Iveco, Renault, DAF, Man, Daihatsu sns.
Ny tsenanay dia ny Moyen Orient, Afrika, Amerika atsimo ary mbola miezaka ny manokatra an'i Eoropa sy Amerika avaratra izahay. Ny ekipa matihanina sy miasa mafy, ao anatin'izany ny departemanta mividy, ny varotra, ny sampana teknolojia ary ny sampana kaonty dia manome anao "Serivisy tokana" ho an'ny fiaraha-miasa.
Manodidina ny 100 ny vokatra vaovao novolavolaina isan-taona araka ny santionan'ny mpanjifanay, ny finamanana fiaraha-miasa maharitra dia mahatonga ny mpanjifa hino antsika ary hanosika antsika hitombo. 'tombony amin'ny tsenany ary miantoka ny fifanarahana momba ny maso irery.
Ny kalitao dia ny fianan'ny orinasa, ny fahafaham-po avy amin'ny mpanjifa dia ny rafitra fanaraha-maso kalitao tsy misy fetra sy ny fisafoana am-pitandremana isaky ny fizotrany araka ny vokatra nasionaly antoky ny firenena misy kilema aotra.
Miaraka amin'ny traikefa fanondranana manankarena, rafitra kalitao ISO 9001, vokatra avo lenta, vidin'ny fifaninanana, serivisy ambony ary fandefasana ara-potoana, azonay antoka fa afaka mahafeno ny fepetra takiana aminao sy mihoatra ny zavatra antenainao izahay. Miaraka amin'ny orinasa manerana an'izao tontolo izao. Manantena ny hiresaka aminao izahay handinika bebe kokoa ny fomba ahafahanay manompo anao.
Ny ZODI dia mifikitra hatrany amin'ny filozofia «miorina amin'ny vahoaka». Manantitrantitra ny hampiasa kolontsaina orinasa tsara hanefena an'i Eropa sy Amerika Avaratra izy. talenta, manome sehatra miasa tsara kokoa amin'ny fampiroboroboana talenta sy fampiharana fandrisihana azo ekena amin'ny talenta mamporisika, mba hahafahan'ny mpiasa tsirairay handroso tsara. Amin'ny ho avy, Ningbo ZODI Auto Spare Parts Co., Ltd. dia hanompo ny mpanjifantsika amin'ny hafanam-po feno, serivisy feno fiheverana ary kalitaon'ny vokatra azo itokisana, mba hampiroboroboana ny ekipa iray manontolo hiroborobo sy handroso bebe kokoa ary hanome anjara biriky amin'ny fanatanterahana ny malaza Tsena iraisam-pirenena ho an'ny fiara mandeha amin'ny laoniny izay miavaka amin'ny hoe "vita amin'ny sinoa".